यी तीन आसलाग्दा नेता, जसले आफ्नो भविष्य आफैँ बर्बाद पारे - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
२०७७ माघ ३, शनिबार १०:५८:००
काठमाडाैँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष मुलुकको नेतृत्व गर्ने भएपछि त्यो कुरा सहन नसकी पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बेग्लै समूह खडा गरी नयाँनयाँ पद सिर्जना गरी रहर पूरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो भाँडाकुटी त्यही समूहका वामदेव गौतमलाई समेत पत्यार लागिरहेको छैन र भैँसेपाटीबाट निस्किनै गाह्रो परिरहेको छ ।
तर, कुनै समय माधव नेपाल, वामदेव गौतमलगायतलाई काँध थापेका र केही राजनीतिक भविष्य पनि आसलाग्दो भएका नेता पनि मूलधार छाडेर बाहिर वहकिएर हिँडिरहेका छन् । योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल र शेरबहादुर तामाङजस्ता केही भविष्य भएका, सरकारमा छँदा पनि केही गरौँ भन्ने तदारुकता देखाएका र छवि नबिगारेका नेताहरु पनि यस पंक्तिमा देखिन्छन् ।
नेकपा विभाजन कुनै ठूलै सैद्धान्तिक विमतिलाई लिएर भएको होइन भन्ने लोकले बुझिसकेको छ । सचिवालयका नौ जना नेताका निजी आकांक्षाबीच तालमेल नहुँदा भएको हो भन्ने पनि आमनेपालीले राम्रोसँग बुझेका छन् । ठूलै कुनै कारण भए लिम्पियाधुरा नेपाली नक्सामा समेटिएपछि, नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व माथि उठेपछि र केही रणनीतिक महत्वका पहलकदमी नेपाल आफैले लिएपछि यो अवस्था पचाउन नसकेका देशी–विदेशी शक्तिको इशारामा प्रचण्डले यो ध्वंशात्मक बाटो रोजे ।
प्रचण्ड कहिल्यै सरल बाटो हिँड्ने नेता होइनन् । पुल भएकै ठाउँमा पनि हाम फालेर नदी तर्नुपर्छ भनेर सबैलाई हाम फाल्न लगाउने, सहकर्मीलाई बगाएर आफू ट्युब बोकेर पारि तर्ने गर्छन् । एमाले सिध्याउन पनि उनले यही गरे । पहिला उनले केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार गरे । पछि माधव नेपाललगायतलाई ओलीको दासत्व कहिलेसम्म स्वीकार गर्ने भन्दै भड्काए । प्रचण्डले भड्काएर भड्किने आत्मालाई के भन्ने ? यो बेग्लै पक्ष छ । तर, ओलीप्रति आकण्ठ आरिस भएका, जति पदमा बसेर पनि नपुग्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता अतृप्त आत्माहरुलाई प्रचण्डले पूर्वएमाले विभाजनको मसला बनाए । यसमा प्रचण्ड सफल पनि भए ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, शेरबहादुर तामाङ आदिजस्ता नेतालाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाएर पछि लगाउन पाए कसले लगाउँदैन र ? प्रचण्डले त बम्पर पार्न सफल भएका हुन् । तर, प्रचण्डको पछि लाग्ने कुनै नेता–कार्यकर्ताको कल्याण भएको अहिलेसम्मको इतिहासले देखाउँदैन । बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेलजस्ता होनहार नेतालाई समेत घर न घाटको बनाएका प्रचण्डले पूर्वएमालेहरुलाई माया गरेर उकेरा लगाउने छैनन् भन्ने स्पष्ट छ ।
एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने दुई तिहाइको सरकार बिनाअवरोध पाँच वर्ष चलेमा नेपाल अभूतपूर्व रुपमा स्थायित्वको मार्गमा अघि बढ्छ । स्थायित्वले केही विधि, प्रणाली र भविष्यको उन्नतिका निम्ति निश्चित संरचना स्थापित गर्दछ । यसो भयो भने राज्य बलियो बन्छ । यस्तो समयको नेतृत्वकर्ताको नाम इतिहासमा रहन्छ । यो सुबाटोमा मुलुक हिँडाउने संगठनको प्रभाव थप विस्तार र सुदृढ हुन्छ । यस सम्भावित प्रगतिको चित्रबाट अहिले नै विचलित भएका तत्वहरुले नेपथ्यबाट गरेको निर्देशनअनुरुप प्रचण्डले यो एमालेनाशक निर्णय गरेका हुन् । त्यसमा पूर्वएमालेकै नेता–कार्यकर्ता जानी–नजानी सहयोगी बनेका छन् ।
अझ भविष्यमा नेकपा र देशै हाँक्न सक्ने नेताहरु मूल धारबाट उछिट्टिएर प्रचण्डपथीय अस्थायी भँगालोमा मिसिन गएका छन् । र, उनीहरुले पुष्पकमल दाहाललाई नेता मानेर ‘श्रद्धेय कमरेड’ भन्दै सम्बोधन गर्नुपरिरहेको छ । एमालेका कार्यकर्तामा दाहालप्रति कति श्रद्धा छ भनेर यदु गौतमको परिवारसम्मै पुग्नुपर्दैन । बाटाघाटा, चौतारा वा मिनीबस जहाँसुकै भेटिने सूर्यमुखी कार्यकर्तालाई सोधे पुग्छ । त्यसैले जो पूर्वएमाले खेमाका जोकोही नेता वा कार्यकर्ता जब प्रचण्डतिर लाग्छन्, तिनको राजनीतिक जीवन समाप्त हुनेछ । यो कुरा स्वयं प्रचण्डका निम्ति ज्यान दिन तयार भएका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतले बुझेका छन् ।
यत्ति नबुझेर योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले छँदाखाँदाको मन्त्री पद त्यागेर हिँडे । शेरबहादुर तामाङले पनि पुनः कानुनमन्त्री पाउनै लागेका बेला रातारात कित्ता परिवर्तन गरे । अर्काको बहकाउमा लागेर यिनले काम गर्नका लागि पाएको अवसर पनि छाडेर हिँडे । अहिले जिम्मेवारी पाउँदा छाडेर हिँड्नेहरुलाई भोलि जनताले किन भोट दिने ? किन कार्यकर्ताले काँध थाप्ने ? के उनीहरु सडकमा आन्दोलन गरेर भोलि यो मन्त्रीभन्दा ठूलो पद पाउँदै छन् ? के उनीहरु अब देशको प्रधानमन्त्री नै बन्नेछन् ?
भोलि यिनीहरुको राजनीतिक पुनरोदय भयो नै भने पनि बढीमा बन्ने भनेको मन्त्री नै हो । पार्टीमा पनि अध्यक्ष भइहाल्ने छैनन् । बुढा स्खलित नेताहरुलाई काँध थाप्न गएका युवाहरुको राजनीतिक पुँजी फर्किनेछ भनेर आस गर्ने ठाउँ पनि छैन । योगेश भट्टराईले दुई–दुईवटा चुनाव काठमाडौँमा हारेर ताप्लेजुङबाट बल्लतल्ल जितेका हुन् र आफ्नो शिर ठाडो पार्ने अवसर पाएका हुन् । केपी ओलीले उनकै जिल्लामा गएर मन्त्री बनाउने घोषणा गरेकै कारण योगेश आजको योगेश बन्न सफल भएका हुन् । यो कुरा चटक्क बिर्सेर अहिले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सडकमा भौँतारिँदै ‘म यहाँ छु’ भन्नु कहाँसम्मको आलाकाँचापन हो ? एकपटक आफैतिर फर्केर आत्मसमीक्षा गर्ने हो कि ?
योगेश र घनश्यामले त हिजो वामदेवसँग माले बनेर हिँड्दा के हालत भयो ? पछि रुजेको बिरालोजस्तो बनेर कसरी एमालेमै फर्किनुपर्यो ? त्यो पनि एकपटक मनन गर्नुपर्ने हो । नेकपाको मौजुदा विवादमा पनि केही समय उनीहरुले कतै नखुलेर विभाजन रोकेका थिए । मिलाउने प्रयासमा लागेका थिए । यो अडानमा मात्र रहिराखेको भए पनि नेकपा फुट्न सक्ने थिएन । पूर्वएमाले खेमाले साथ नदिएसम्म प्रचण्ड आफ्नै बलबुताले यो पार्टी फुटाउन सक्नेवाला थिएनन् । तर, प्रचण्ड मोहजालमा माधव नेपाल परे । माधव नेपालसँग सम्भावनायुक्त भविष्य भएका आसलाग्दा दोस्रो–तेस्रो पंक्तिका नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बलि चढाए । यस घडीमा एमाले कार्यकर्ताहरुसँग हार्दिक समवेदनाबाहेक अरु केही भन्न सक्ने विकल्प देखिँदैन ।